Dhaqdhaqaada Ganacsi eee Dekeda Kismaayo oo sii kordhaya – idalenews.com
Dhaqdhaqaada Ganacsi eee Dekeda Kismaayo oo sii kordhaya
Dhaqdhaqaaqa Dekeda Kismaayo ayaa sare u kacay wixii ka dambeeyay markii maleeshiyaadka Shabaab laga saaray magaalada Kismaayo.
Dekeda weyn ee magaalada Kismaayo waxa ay ka mid tahay ilaha ugu muhiimsan ee dhaqaalaha ka soo galo dalka Soomaaliya hasa yeeshe mudo ayey gacanta ku hayeen Dekeda Kismaayo maleeshiyaadka Al shabaab dhaqaalaha ka soo galena uu ahaa midka kaliya ay ku tiirsanaayeen.
4 bil ka hor ayey ciimada Kenyanka ah iyo kuwa dowlada Soomaaliya ee ka howlgala gobolada Jubbooyinka waxaa u suurta gashay inay Al shabaab ka saaraan Dekeda oo ay dib ugu soo celiyaan gacanta dowlada, durba waxa ay Dekadu bilawday howlaheedi caadiga ahaa si dar dar leh ayeyna ku socdaan.
Inkastoo shaqadu aysan aheyn sidii hore oo ay Dekadu ku soo xirtaan Maraakiib fara badan haddane howshu waa ay socotaa 24 saacna waa shaqeysaa Dekada weyn ee Kismaayo, iyadoo amaankeeduna uu yahay mid aad u wanaagsan.
Al shabaab intii ay Kismaayo kusugnaayeen waxa uu dhaqdhaqaaqoodu ku tiirsanaa daqliga kasoo galo Dekeda weyn hasayeeshe hadda waxa ay u muuqataaa mid dib ugu soo laabatay gacanta shacabka maadama ay gacanta ku hayaan maamul dowlada matala daqliga kasoo galana waxa ay ku maareeyaan adeegyada shacabka kuu nool gobolada Jubbooyinka inkastoo iminka uusan soo galin daqli saa u sii badan.